ချစ်သူများနေ့ အမှီ apk လေးရေးပြီး လက်ဆောင်ပေးကြမယ်
9:55 AM knowledge For Android apk No comments
Download Link-------------->>>>>>>Download Here!<<<<<<<
ကျနော်တို့ မကြာခင်မှာ V'Day ကို ရောက်တော့မယ်နော် ကိုယ့်ချစ်သူကို အမှတ်တရဖြစ်အောင် လက်ဆောင်လေးတွေပေးကြရအောင် မိတ်ဆွေတို့တော့ မသိဘူး ကျနော်ကတော့ ကိုယ်တိုင် ပစ္စည်းလေးတွေလုပ်ပီး ချစ်သူကို ပေးရတာ ကြိုက်တယ်ဗျ အာ့ကြောင့်မို့ သူငယ်ချင်းတို့လည်း ကိုယ့်ချစ်သူကို ကိုယ်တိုင် APK လေးဖန်တီးပီး လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးစေချင်ပါတယ် ကိုယ်နဲ့သူ အတူ ရိုက်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံလေးတွေကိုပေါ့ဗျာ ကဲ စိတ်ဝင်စားသွားပီထင်တယ် စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာရှိတဲ့ ဖိုင်လေးတစ်ဖိုင်ကို ဒေါင်းလိုက်ပါ size က 60 MB ရှိပါတယ် အတွင်းထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ ဖိုင် အကုန်ပါ ပါတယ် မရေးတက်ရင် လေ့လာဖို့ အတွက်လည်း PDF File လေးပါ ထည့်ထားပေးပါတယ် ဒေါင်းလိုက်ကြပါဦးနော် အဆင်မပြေရင်လည်း ပြန်ပြောပါဦး အဆင်ပြေပါစေဗျာ :)
လူသိရှင်ကြား အသဲကွဲနေ သူ
8:42 AM Android ဖုန်းဆော့ဝဲ 1 comment
Keyboard ပုံစံအသစ်လေးတွေပါ လိုအပ်သူများ ဒေါင်းနိုင်ပါတယ် ခင်ဗျာ
Frozen Keyboard လေးကို Windows Phone Keyboard Style ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့
Credit to - Ko Thiha Aye Kyaw
Han Zaw Oo Facebook Pag မှကူးယူတင်ပြပေးလိုက်ပါသည်
OPPO U7015 - Version 4.1.1 ကိုမြန်မာစာအမှန်လေးထည့်ကြရအောင်
8:21 AM ROOT Softwares, ဖုန်း ROOT နည်း No comments
oppo U7015 ကိုroot လုပ်နည်းလေးပါခင်ဗျာ။oppo လေးတွေလည်းမဆိုးဘူးဗျ မြန်မာစာရော root အတွက်ပါလုံးဝစိတ်ချစေရမယ်နော်။
တစ်နေရာတည်းနဲ့ တစ်ထိုင်တည်းနဲ့ 10 မိနစ်လောက်အတွင်းမှာ သင့် ကို မြန်မာစာမှန်ကန်ပြီး
error ကင်းတဲ့ ဖုန်းတလုံးကိုသင်ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါပြီ။တကယ်တော့root လုပ်တာမခက်ပါဘူး ဒါပေမယ့် 
မိမိရဲ့ ပထမဦးဆုံးအတွေ့ အကြုံ နဲ့ တော့ မစွန့် စားစေခြင်ဘူး အခုလို 100 % အာမခံထားရင်တော့စိတ်ဝင်စားစရာပဲနော် အိုကေအောက်မှာ လိုက်ကြည့် ပေးပါခင်ဗျာ။
root tool ကိုယူလိုက်ပါ link-1 ; link 2
usb driver link 1; link -2
ဖုန်းကို unknow source ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပြီး usb debugging လုပ်ပေးပြီးကွန်ပျူတာနှင့် ချိတ်လိုက်ပါ။မချိတ်တတ်ရင်အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ဝင်ဖတ်ပေးပါ
usb driver ကိုrun လိုက်ပါ။
ပြီးရင် root tool ကို run လိုက်ပြီးအစိမ်းရောင်အကွက်ကလေးကိုနိပ်ပြီး root လုပ်ပါ။ ခဏနေကျရင် ဖုန်းမှာ restart ကျသွားပြီး root လုပ်တာအောင်မြင်သွားပါပြီခင်ဗျာ။
ဒီအဆင့် မှာတော့ မြန်မာစာမှန်အောင် ဆိုရင် font changer ကို mmsd font changer ကိုသုံးပါ။ browser ကို mandalay browser ကို install လုပ်ပါခင်ဗျာ။
mmsd font changer link 1 ; link 2
zawgyi font link-1 ; link2
keyboard link 1- ; link- 2
myandalay browser link -1 ; link -2
ယနေ့ထွက် Viber v 4.2.0.1733 လေးပါ
7:49 AM Android ဖုန်းဆော့ဝဲ No comments
ကဲဒီနေ့ မှနောက်ထပ် အသစ် update ပေးလိုက်တဲ့ viber နောက်ဆုံး ဘားရှင်းလေးပါ။
အရင်ဘားရှင်းလိုပဲ မိမိ နဲ့ အဆင်မပြေတဲ့ နံပါတ်တွေ၊မကြိုက်တဲ့လူရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို Block နိုင်တယ်။
အားလုံးကတော့ အရင်တိုင်းပါပဲ သိပ်မထူးခြားသေးပါဘူးခင်ဗျာ။
Google Play မှ လိုချင်တယ် ဆိုရင် ဒီကိုသွားလိုက်ပါ
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 19.1 MB ရှိပါတယ် လိုအပ်မယ်ဆိုအောက်မှာဝင်ဒေါင်းလိုက်ပါ
8:45 AM Android ဖုန်းဆော့ဝဲ No comments
ဆော့ဝဲကို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့License Ageeement ပေါ်လာမယ် Decline နှိပ်
နောက်တစ်ကွက် Login Facebook မှာ NO,i don`t like sharing နှိပ်
နောက်တစ်ကွက် Photo အောက်မှာ Add image ကို နှိပ် ပုံထည့် လိုက်
ပုံတွေရောက်လာပီဆို အပေါ်နားက Music ကိုနှိပ်SD ကဒ်ကသီချင်းထည့်
ပီးရင် Transition ကိုနှိပ် Effect ဒီဇိုင်းရွေး ပြီးရင် Settings ကို နှိပ်ပါ
Video name က ကြိုက်တာပေး အောက်က ဆိုဒ်အကြီးအသေးရွေးပါ
Create ကိုနှိပ် အထဲမှာ Craete Movie လို့ ပါတယ် အဲ့ဆိုရင်သီချင်းရပီ
ပြည့်သွားရင် MY File ထဲက Slideshow Maker Folder ထဲသွားကြည့်
ဒါဆိုရင် ဖုန်းကနေ ဓာတ်ပုံနဲ့ သီချင်းတွဲပြီး MP4 ထုတ်လို့ ရပါပြီနော်
ပုံနဲ သီချင်း ကွက်တိကျဖို့ ကတော့ ပုံ60 လောက်ကို သီချင်း 1ပုဒ်ပဲ
အတိုအရှည် ပုံအနဲ့ အများကတော့ ကိုယ်တိုင်ထည့်ပီး စမ်းသပ်လိုက်ပါ
အဆင်လည်းပြေ အသုံးလည်းဝင်တာမလို့အောက်ကလင့်မှဒေါင်းလိုက်
ProgDVB Professional Edition 7.20 Final (x86-x64) + Reseter 37Mb !!!
6:31 AM ကွန်ပြူတာ Software No comments
Internet TV and Radio တော်တော်များများကိုကြည်လင်စွာကြည့်ရှု့နိုင်သည့်အပြင် channels ပေါင်း
တိုက်ရိုက် Audio/Video recording လုပ်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။32 /64 bit နှစ်ခုလုံးကိုတွဲပြီးတင်ပေး
မှာဖတ်ကြည့်လိုက်ပါ။Win XP/2000/Vista/Win 7/Win 8/Win 8.1 အားလုံးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Changes in ProgDVB v7.02 (31.01.2014)
*Support of RTMP.
*Recording for FLV channels.
အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်တော့ကြော်ငြာများကို တစ်ကြိမ်လောက်သာ ကလစ်ခဲ့ပါခင်ဗျာ။
Download Ok? Please Clicking Once onaAd Banner.
မှ ပြန်လည် ကူးယူတင်ပြပေးလိုက်ရပါသည် ဒေါင်းလင့်တွေ သေနေတာတွေ့ရင် ပြန်ပြောပေးခဲ့ကြပါဦးနော်
Android Power Dead ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းစာအုပ်နှင့်လိုအပ်တဲ့ Software များ
8:33 PM ဖုန်းနည်းပညာများ No comments
Android Phone လေ့လာနေသူများ .. Service သမားများအတွက်အလွန်အသုံးဝင်တဲ့ စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ် ပါတယ်..Android Phone တွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ Power Dead ဆိုတဲ့ ပါဝါလုံးဝမနိုးတဲ့ ပြသနာတွေကိုဖြေရှင်း အကြောင်းရေးထားတဲ့အဖိုးတန်စာအုပ်ကောင်းတစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်.. အထဲမှာ လိုအပ်တဲ့ Software တွေ rar နဲ့အကုန်ထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်..တစ်ချက်ခုတ် ၄ချက်ပြတ်ပေါ့ဗျာ..
ချစ်သူများနေ့ အမှီ apk လေးရေးပြီး လက်ဆောင်ပေးကြမယ်...
OPPO U7015 - Version 4.1.1 ကိုမြန်မာစာအမှန်လေးထည့်...
Phone ထဲကနေ ဓာတ်ပုံနဲ့ သီချင်းတွဲ၍ Slideshow MP4ြ...
ProgDVB Professional Edition 7.20 Final (x86-x64) ...
Android Power Dead ပြဿနာဖြေရှင်းနည်းစာအုပ်နှင့်လိ...
ဒီတစ်ခါ တော့CWM ခေါ် clock work mode recovery roo...
100% အောင်မြင်သော Facebo♥k အကောင့်ဖွင့်နည်း
Proxy Server ဆိုတာ ဘာလဲ